सलमान खान देखि अभिषेक बच्चन सम्म जसले पहिलो प्रेमलाई बिवाहमा परिणत गर्न स'केनन्... - Filmy News Portal Of Nepal
सलमान खान देखि अभिषेक बच्चन सम्म जसले पहिलो प्रेमलाई बिवाहमा परिणत गर्न स’केनन्…
बलिउडमा यस्ता धेरै जोडीहरु छन् जसको प्रेम सम्बन्धले चर्चा पाएको छ । धेरै बलिउड सेलिब्रेटीहरुले प्रेम सम्बन्धलाई बिवाहमा परिणत पनि गरेका छन् । तथापी कतिपय सेलिब्रेटीहरुको प्रेम अ’धुरो नै रहने गरको छ अथार्त ब्रे’कअ’प हुने गरेको छ ।
यस लेखमा हामी यस्ता बलिउड सेलिब्रेटीहरुको कुरा गर्ने छौं, जसको ब्रे’कअ’प बिवाहको तयारी चल्दा नै भएको थियो । लामो समय प्रेम सम्बन्धमा रहेर विवाहका लागि ‘इन्गेजमेन्ट’ गरेपछि एक अर्काबाट टा’ढिएका केही जोडीहरु :-
1, सलमान खान/संगीता बिजलानी : बलिउड अभिनेता सलमान खानले कहिले विवाह गर्लान ? उनको विवाह को सँग होला ? उनकी प्रेमिका को होलिन् ? यस्ता प्रश्नहरु भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा बा’रम्बार उ’ठिरहेका हुन्छन् ।
धेरैवटी अभिनेत्रीसँग प्रेमसम्बन्धमा रहेका सलमानको संगीता बिजलानीसँग विवाहको लागि कार्ड समेत छापेका थिए । तर, उनीहरुबीच सम्बन्ध तो’डियो । त्यसपछि पनि धेरै अभिनेत्रीहरुसंग सलमानको नाम जो’डिएका छन् ।
2, अभिषेक बच्चन/करिश्मा कपूर : करिश्मा कपूर बच्चन परिवारकी बुहारी बन्नेवाली थिइन् । अभिषेक बच्चन र करिश्मा कपूरको न्गेइजमेन्ट पनि भइसकेको थियो । तर, भाग्यको लेखा अ’र्कै भएर होला करिश्मा र अभिषेकको इन्गेजमेन्ट तो’डियो ।
किन उनीहरुको इन्गेजमेन्ट टुट्यो भनेर आजसम्म कसैलाई थाहा छैन । इन्गेजमेन्ट तोडिएपछि अभिषेकले ऐश्वर्या रायसँग विवाह गरे । भने करिश्माले सञ्जय कपूरसँग विवाह गरिन् । करिश्माको भने सम्बन्धविच्छेद भइसकेको छ ।
3, विवेक ओबारोय/गुरप्रीत गिल : बलिउड अभिनेता विवेक ओबेरोयले प्रेमिका गुरप्रीत गिलसँग इन्गेजमेन्ट गरेका थिए । तर, उनीहरुको सम्बन्ध विवाहसम्म पुग्न स’केन । विवाह न’हुँदै उनीहरुबीच सम्बन्ध बि’ग्रियो र विवेकले प्रियंका अल्वासँग विवाह गरे । – एजेन्सी